तपाईंले बिक्रीको लागि Dianabol पाउडर बारे सबै जान्न आवश्यक सबै कुरा
/ब्लग/Dianabol , ग्यालरी/तपाईंले बिक्रीको लागि Dianabol पाउडर बारे सबै जान्न आवश्यक सबै कुरा
प्रकाशित 12 / 27 / 2018 by Dr. Patrick Young मा लेखियो Dianabol, ग्यालरी.
के तपाईं आफ्नो मांसपेशियों को जन को बढावा को देख रहे हो, उनलाई शुरू गर्न को लागि या पर्याप्त लाभ को बनाए राखन को लागी? Dianabol (methandrostenolone) पाउडर तपाईको अर्को ठूलो कुरा हुनुपर्दछ। यी बारे जान्न को लागी थाहा पाउनुहोस् anabolic steroids, उपयोग, प्रभावशीलता, र साइड इफेक्ट कसरी बाईपास गर्ने।
यदि तपाईं एक गम्भीर बिजुली बन्नुहोस् भने, तपाईं मात्सेन्ट जन प्राप्त गर्ने संघर्ष अझ राम्रो बुझ्न सक्नुहुन्छ। जिमको सदस्यता लिने र बाहिरी पङ्क्ति वा फेफड़ों जस्तै ती थोरै कम्पाउन्ड कार्यशालाहरू गरिरहँदा तपाईंको मांसपेशिहरु टमाटरको लागि पर्याप्त नहुन सक्छ।
कार्य बाहिर स्वास्थ्य लाभ छ, तर यसको अधिकतम धैर्य, स्थिरता र समय चाहिन्छ। मेरा मतलब, तपाईं केवल हप्ताको लागि व्यायाम गर्न सक्नुहुन्न, आफैलाई दर्पणमार्फत जाँच गर्नुहोस्, र जादुई दुबला मांसपेशिहरु हेर्न चाहनु हुन्छ। तथापि, तपाईं अनुमोदित anabolic स्टेरियोड्स संग आफ्नो workouts पूरक गरेर बुद्धिमानी कार्य गर्न सक्छन्, जो बिना आफ्नो मांसपेशियों को सात दिनों को भित्र मा वृद्धि हुनेछ।
Dianabol (Methandrostenolone) पाउडर के हो?
डियानोबोल पाउडरको विवरण
कच्चा डियानोबोल CAS no सँग एक रासायनिक यौगिक हो। (72-63-9), C17 anabolic स्टेरॉयड को वर्ग संग। यो एक मजबूत सिंथेटिक स्टेरॉइड हो जसले 1950 को पछि देखि लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। दबाइ मुख्यतः एथलीट र बाहिरी बस्तीको लाभ उठाउँछन् जसले आफ्नो मांसपेशिहरु कायम राख्न र छोटो समयमा आफ्नो बल बढाउन चाहन्छ।
एनाबोलिक स्टेरियोड्स हेटेरोक्सिक हुन जान्छन्। यो प्रभाव कम गर्न को लागि, Dianabol को डेवलपर्स 17 मा एक मेथिल समूह को प्रभावित गरेth कार्बनको स्थिति। डबल-बाण्ड पनि कार्बन परमाणुहरूको पहिलो र दोस्रो पदमा थपिएको छ जुन सम्भावित एंड्रोनिक्स साइड इफेक्टहरू जस्तै मुँहासे वा पुरुष ढाँचा गम्भीरता कम गर्न।
मेन्जेल्रोल एसीटेट पाउडरको लागि सबैभन्दा व्यापक परिचय
अन्य स्टेरियोड्सको विपरीत, अधिकांश देशहरूमा डियानोबोल प्रोटीन पाउडर अनुमति छ। तथापि, औषधि एक अनुसूची तेस्रो नियन्त्रण पदार्थ हो र भर्खरै मात्र अमेरिकामा उपलब्ध हुनेछ
द्वितीय विश्वयुद्ध पछि, अमेरिकन र सोभियत युनियन सधैँ प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए र विचारधारामा एकअर्कालाई ओभरमैर्ट गर्न खोज्दै थिए। यद्यपि उनीहरू दुईजना वास्तविक युद्धमा संलग्न थिए, उनीहरू खेलकुद र चन्द्रमा अन्वेषणमा एकअर्कालाई धकेल्दै घृणा गरे।
1940 र 50 को बीचमा, रूसीहरूले ओलम्पिकमा प्रभुत्व गरे, टेस्टोस्टेरोन उत्पादनका लागि उनीहरूको एथलीटहरूको प्रयोग गरी धन्यवाद। तथापि, यस रहस्य पछि अमेरिका हुँदा छोटो छोटो थियो। ओलम्पिक डाक्टर, जॉन जेइगलरले चाल पत्ता लगाए। सोभियत युनियनलाई अगाडि बढाउन बोलीमा उनले सिबा फार्मास्यूटिकल्ससँग मिलेर समान उत्पादनको साथ आउँथे।
Dianabol (methandrostenolone) पाउडर 1950s अन्तमा अस्तित्वमा आयो। यो 1960s र '70s को बीच स्टेरियोड्स बडी बिल्डिंग मा असाधारण विकल्प को रूप मा काफी लोकप्रिय थियो।
पूर्वनिर्धारितहरूको विपरीत, यो औषधि बजारमा पहिलो मौखिक एनाबोलिक स्टेरॉइड थियो। यस औषधिको उद्देश्य एथलीटहरूले स्टेरियोड्सको गैरकानूनी इंजेक्शनलाई छेउमा राख्थ्यो। यो कम androgenic प्रभाव छ र अधिकतर देशहरुमा पर्चे मार्फत उपलब्ध छ। टेस्टोस्टेरोन भन्दा डी-बोल दुई पटक बलियो हुन्छ।
Dianabol टेस्टोस्टेरोन Anadrol
Anabolic रेटिंग 210 100 320
एण्ड्रोनिकनिक मूल्याङ्कन 60 100 45
डायनब्ल पाउडरको रासायनिक र शारीरिक लक्षण
उत्पादन नाम Methandrostenolone
रासायनिक नाम 17a-Methyl, 17b-हाइड्रोक्सी, 1,1-androstadienone, 3-one
CAS no। 72-63-9
पिघ्ने बिन्दु (डिग्री सेल्सियस) 163 - 167
आणविक वजन 300.442 जी / mol
आणविक सूत्र C20H28O2
विलेयता, घुलनशीलता · पानी (9.7 मिलीग्राम / एल 25 डिग्री सेल्सियस मा)
· ग्लेशियल एसिटिक एसिड
उपयोग मांसपेशिहरु मा वृद्धि को सुविधा दि्छ
ब्रान्ड र व्यापार नामहरू Dianabol
कसरि Dianabol (methandrostenolone) पाउडर अनलाइन किन्नुहोस
Anabolic स्टेरियोड किन्न केहि कारकहरु मा निर्भर गर्दछ। केही स्थानहरूमा खरीद, स्वामित्व, र डियनबोल पाउडरको प्रयोगमा स्थापित प्रतिबन्धहरू छन् किनभने तपाईंको स्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उदाहरणको लागि, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानाडामा मिथ्याण्डोरोनोलोन र यसको डेरिभेटिभको प्रयोग गैर कानूनी पर्दछ। तथापि, मेक्सिको जस्तो अन्य देशहरूमा, Dianabol पाउडर खरीद स्नीकरको एक जोडा खरिद गर्न सजिलो छ।
कानूनी खरीद Dianabol
D-bol तपाईंको राज्यमा प्रतिबन्धित लागू हुन सक्छ, तर तपाइँ अझै पनि इजाजतपत्रबाट कानूनी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ Dianabol पाउडर निर्माता। मलाई बयान गर्न देउ। यदि तपाइँसँग डाक्टरबाट वैध पर्ची छैन भने, तपाईंको दिमागले प्राय: कालो मार्केटमा क्लिक गर्नेछ। ठीक छ, सम्झौता फिर्ता ढोकाको प्रयोग गरेर राम्रो हुन सक्छ, तर तपाईले नकली, असुरक्षित, र घातक औषधिमा उडाउन सम्भव छ।
यद्यपि यो राज्यमा स्थानान्तरण गर्न असम्भव छ जसले स्टेरियोड्सको प्रयोगलाई वैध बनाएको छ, तपाईं अझै वैध डिआईबोल पाउडर अनलाइन पसलहरूमा बैंक गर्न सक्नुहुनेछ। कम से कम, तपाईं उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन को गारंटी दिइन्छ जुन बाँझ र विनियमित शर्तों को तहत उत्पादन गरिएको छ।
बिक्रीको लागि Dianabol पाउडर
विभिन्न अनलाइन विक्रेताहरू बिक्रीको लागि anabolic स्टेरॉयड प्रस्ताव गर्दै छन्। चूंकि चिनियाँ भण्डारहरू बाढीले भरिएको छ, तपाईं डुबियाबोल पाउडर चीनको लागि वरिपरि घुमाउन सक्नुहुन्छ, विशेष गरी थोक खरिदहरूमा। विश्वसनीय विक्रेता फेला पार्न, शीर्ष-मूल्याङ्कन गरिएको स्रोत, ढुवानी लचीलापन, र विशेष साइटमा सम्बन्धित साइटको उपलब्धतालाई विचार गर्नुहोस्।
Dianabol पाउडर अनलाइन खरीद को चरणहरु:
यो जस्तै https://www.proanabolics.com/ वा कुनै अन्य विश्वसनीय डियानियोल पाउडर कारखानामा जानुहोस् चीनियाँ पसल.
खोजी पट्टीमा क्लिक गर्नुहोस्, "Dianabol" टाइप गर्नुहोस् र मेट खोजी गर्नुहोस्
तपाईंलाई ढुवानीको समयमा सजिलो ट्रयाकिङको लागि खाता दर्ता गर्न को लागी प्रोत्साहित गरिने छ। यद्यपि, तपाई अतिथिको रूपमा चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो खाता विवरण प्रदान गर्नुहोस्
अर्डर पुष्टि गर्नुहोस् र तपाईंको ढोकामा डिलिवरीको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
ध्यान दिनुहोस् कि Dianabol पाउडर मूल्य एक विक्रेताबाट अर्को देखि भिन्न हुन्छ र तपाईले किन्नु भएको मात्रा।
कसरी घरमा Dianabol बनाउन
जसरी तपाईं तयार रेटेड स्टेरॉयड खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईले अलग-अलग कच्चा माल खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको घरको डाइयनबोल पाउडर नुस्खाको साथ आउन सक्नुहुन्छ। यो प्रक्रियामा फायदेमंद छ कि यो आर्थिक छ र रूपान्तरण तपाइँले तपाईंको शरीरसँग पत्राचारमा खुट्टा अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ।
त्यहाँ पाँच Dianabol पाउडर रूपांतरण व्यञ्जनहरू छन्, जुन प्रयोगमा सामाग्री र खुट्टा अनुसार भिन्न हुन्छ।
बेंजिले बेनोजेट (बीबी)
बेंजिल रक्सी (बीए)
इथिल ओलेटे (ईओ)
सिरिंज र बाँझेर सिरिन्ज फिल्टर
कसरी घरमा डियानोबोल बनाउनको विवरणमा जम्मा गर्नुहोस्;
20ML @50 मिलीग्राम / मिलीलीटर 250ml / @80 मिलीग्राम / मिलीलीटर 250ML @80 मिलीग्राम / मिलीलीटर 100ML @50 मिलीग्राम / मिलीलीटर 50ML @50 मिलीग्राम / मिलीलीटर
डी-बो पाउडर 1g 20G वा 17.86ml 20G वा 17.86ml 5G वा 5.6ml 2.5G वा 2.23ml
अंगूर तेल 5.0ml 182.14ml 157.14ml 29.4ml सट्टामा रातो तेल प्रयोग गर्नुहोस् (31.77ml)
सामान्यतया, डबुल पाउडर कडाइको स्वाद हुन्छ, तर माथिको अवयवहरूले स्वादलाई बेवास्ता गर्दछ।
कसरी डियानोबोल (डी-बोल्ट) काम गर्दछ
Dianabol पाउडर प्रोटीनको संश्लेषण बढाउने र नाइट्रोजन अवधारण बढ्दै गर्दा मात्सवहरू रोक्नबाट रोक्छ। यो ड्रगले तपाईंको शरीरलाई सबै खपत प्रोटीन मांसपेशिहरु मा ध्यान दिन सक्दछ। यसको आधा आधा जीवनको लागि धन्यवाद, तपाईले 7-10 दिन भित्र केही दर्ता सकारात्मक परिवर्तनहरू देखाउनुहुनेछ।
स्टेरॉइड प्रयोगकर्ताको भूख, बल र मूड लाई उत्तेजित गर्छ।
डियानोबोल (डी-बोल) अर्ध-जीवन
Dbol सँग4घण्टाको औसत आधा-जीवन छ। यो अवधि अत्यन्त छोटो छ, तपाईंले रक्त एकाग्रता स्तर को बनाए राख्न को लागि दिनभरि खुल्ला खुल्ला विभाजन गर्न आवश्यक पर्दछ।
Dianabol डिटेक्शन समय
स्टेरॉइड तपाईले अन्तिम पटक लिनुभन्दा6हप्ता सम्म पत्ता लगाउनेछ। यदि तपाईं एक सक्रिय एथलीट हुनुहुन्छ भने, तपाईंले परीक्षण गर्न दुई महिना अघि डायनबोल लिन रोक्नु पर्छ।
Dianabol नतिजा: म के प्राप्त गर्नेछु?
Anabolic स्टेरियोड्स catabolic प्रक्रियाहरु लाई उभरने र प्रोटीन एनालिलिज्म लाई बढाएर काम गर्दछ। बडिबिल्डरहरूको लागि, तपाईं काम गर्ने बेलामा सुधारिएको तालिमको अनुभव गर्न सम्भव छ। यद्यपि डियानोबोलले तपाईंलाई भालाकार उपस्थिति दिन सक्दैन, यसले कम्तिमा तपाईंको मांसपेशिहरु बढाउनेछ र तपाईलाई भन्दा पहिले भन्दा फुलर लगाउनेछ।
जिम ब्रोकरहरूमा, Dianabol स्टेरॉयड आफ्नो बल बढाउन र तीव्र workouts सहन को लागि सहनशीलता दिन को लागी सबै भन्दा राम्रो पूरक हो। दबाइले रिकभरी समय बढाउँछ र एकै समयमा थकान कम गर्छ।
Methandrostenolone रोगीहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो नुस्खा हो जसले स्वस्थ वजन हासिल गर्न वा राख्ने समस्यामा छ। उत्पादनले तपाईँलाई दुई हप्तामा 20 पाउन्ड सम्म थप गर्न सक्छ।
टेस्टोस्टेरोन स्तर बढाउनुहोस्
यदि तपाइँ कम टेस्टोस्टेरोन अवस्थाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, तपाईंको डाक्टरले कानूनी स्टेरॉयडहरू जस्तै डबुलको वर्णन गर्न सम्भव छ।
नाइट्रोजन अवधारण र ऊतक मरम्मत बढाएर, विशेष गरी छाला जुत्ता, सर्जरी, वा जलाउने। थप रूपमा, डियानोबोल विशिष्ट प्रकारको अनीमियाको उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ।
डियानोबोल (डी-बोल) डोजर र प्रयोग (के यो डियनबोल लिन सुरक्षित छ?)
मानक Dbol खुराक 15 र 50mg / दिन को बीच पर्दछ। तथापि, केहि अनुभवी प्रयोगकर्ताहरूले प्रति दिन 100mg को प्रयोग गर्दछन्। नोट गर्नको लागि सबैभन्दा मुख्य कारक हो कि स्टिरोड्स को उच्च खुराक अधिकतर तपाइँको रक्तचाप को प्रभावित गर्नेछ।
महिला र newbies को 15mg भन्दा बढी केहि लिनु हुँदैन। महिला एथलीटहरूको लागि, अधिकतम दैनिक खुट्टा 30mg हो। योभन्दा माथि कुनै पनि मूल्य पुरुष यौन विशेषताहरू र अन्य अपरिवर्तनीय डबलब साइड इफेक्टमा वृद्धि हुन सक्छ।
डुब्लेको छोटो आधा जीवन छ, यसैले, एक दिन खुट्टा 2-3 पटक विभाजित गर्न आवश्यक छ। यो भोजन समय वरिपरि लागू औषधि लिन मिल्ने जस्तै सामान्य साइड इफेक्ट कम गर्न को लागी सल्लाह दिइएको छ। डियानोबोलको जीवनी वृद्धि बढाउने एक निश्चित तरिका तपाईंको आहारमा अंगूरफुल्भ समावेश गर्दछ।
Dbol पहिलो anabolic स्टेरॉइड थियो जुन मौखिक रूपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि ड्रग्स लोकप्रिय रूपमा उपलब्ध छ र ट्याब्लेटको रूपमा लिइन्छ, तपाइँ यसलाई इन्ट्रामुसेलुलर इंजेक्शनमार्फत व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। उत्कृष्ट नतीजाहरूको लागि, तपाईंले डेरिबोलिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रिमोबोलान, वा टर्नबोलोन जस्ता अन्य स्टेरियोड्सहरू प्रयोग गरेर Dianabol स्ट्याकलाई गम्भीर पार्नु पर्छ।
एक सामान्य डायआनाबोल चक्र एक नयाँ मात्रामा 30 - 50mg को साथ चार र छ हप्ताको बीचमा हुन्छ। अवधि भित्र, जिगर क्षति रोक्नको लागि कार्डिरीन र N2guard को दैनिक खुराक संग स्टेरॉइड स्ट्याक गर्न निश्चित गर्नुहोस्। अरोसासिन पनि अरोमेजलाइजेशन रोक्नको लागि हातमा आउँदछ, जुन एस्ट्रोजेन गठन र पानी अवधारणको लागि उत्तरदायी छ।
Dianabol नतिजा सामान्यतया ध्यान दिन सक्नुको पहिलो हप्ता भित्र। यहाँ पूर्ण चक्रबाट तपाईं कति सक्दो वजन प्राप्त गर्न अनुमान छ।
अवधि (हप्ता) मास (पाउन्ड)
पोस्ट साइकल चिकित्सा
छ हप्ताको अन्त्यमा, पिट्यूटरी ग्रंथिहरूमा हार्मोन दमनबाट बच्न पोस्ट-चक्र थेरेपीलाई विचार गर्न आवश्यक छ। अधिकतर अवस्थामा, चक्रले टेस्टोस्टेरोन स्तर घटाउनेछ। यसैले, तपाईं सामान्यतया स्तर फर्किने निश्चित सुनिश्चित गर्नका लागि कार्यरत हुनुहुन्छ जुन तपाईंले संचित गरेको मांसपेशी जन गुमाउनु भएन। यो उपचार चार हप्ता सम्म हुन्छ।
डियानोबोल (डी-बोल) साइड इफेक्ट: साइड इफेक्टहरू कसरी बचाउन सकिन्छ
Dianabol स्टेरॉयड केवल फायदेमंद हुन्छ यदि तपाईं सावधानीपूर्वक ध्यान दिनुहुन्छ र जोखिम समावेश गर्दा तपाईं बुद्धिमानी प्रयोग गर्नुहुन्छ। अधिक तपाईं खुसी बढ्नुहुन्छ, उच्च दुर्व्यवहार को गंभीरता को अनुभव को उच्च।
पानी कायम राख्ने वा चिल्लो
पिट्यूटरी ग्रंथिको दमन
असामान्य बाल विकास
पुरुष ढाँचा गोलापन
भाइरसहरू वा पुरुषहरूमा पुरुष यौन विशेषताहरू जस्तै गहिरो भ्वाईस चेर्ड्स, कपालको असामान्य वृद्धि वा क्लटरिसको विस्तार।
खराब एलडीएल कोलेस्ट्रलमा वृद्धि र राम्रो एचडीएल कोलेस्ट्रलमा कमी
Dianabol साइड इफेक्ट्स कसरि बचें र प्रबंधित गर्नुहोस
अरोमेटिस अवरोधक वा एन्टी एस्ट्रोजन प्रयोग गर्नुहोस्
दुब्लेले एस्ट्रोजेनमा सुगन्धको प्रवृत्ति छ। जब शरीरमा यस हार्मोनको धेरै अधिक हुन्छ, परिणामहरू पानी अवधारण, फिसलन, बांझपन, जिनेकोमास्टिया वा अवसाद हुन्।
सुसमाचार यो हो कि तपाई एस्ट्रोजेनमा डबलब परिवर्तन गर्न रोक्ने aromatase अवरोधक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केहि उदाहरणहरूमाजोजोजोल, अरोसासिन र एरिमिडीक्स समावेश छ। सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईं यिनी पूरकहरु Dianabol चक्र र पोस्ट चक्र उपचार को समयमा ले लो।
स्वास्थ्य जिगर पूरक
सर्वोच्च पूरकले अक्सीडाइरेक्ट हानि कम गरेर लिभर विषाक्तता को कम गर्नु पर्छ। यदि यसमा दूध थिस्टल, एनएसी, TUDCA, अन्य अमीर सामग्रीहरू छन् भने, यो बिल फिट बस्दछ।
तपाईंलाई खनिज संग कोलेस्ट्रॉल स्तर सुधार गर्न को लागि Dianabol ले संयोजन गर्न आवश्यक छ। यी मध्ये केहि एड्सहरू रातो खमीर चावल, माछा तेल, नाइसिइन, वा सह एंजाइम क्युक्सएनमक्स समावेश गर्दछ।
सामान्यतः, शरीर द्वारा उत्पादित टेस्टोस्टेरोन को मात्रा Dbol चक्र को समयमा पर्याप्त नहीं हुनेछ। यदि स्तर कम हुन्छ, मांसपेशी निर्माण प्रक्रिया पनि स्टल हुनेछ। यसकारण, ड्यान्याबोलसँग केहि टेस्टोस्टेरोन पूरकहरू स्ट्याकिङले तपाईंको लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
तपाईंको आहारमा जाँच गर्नुहोस्
ओमेगा फैटी एसिड र स्वस्थ प्रोटीनमा अमीर खाद्य पदार्थ लिनुहोस्। उच्च-मोटो भोजन पानी प्रतिधारण को मुख्य कारण हो, यसैले, रक्तचाप को स्तर मा वृद्धि।
सानो र नियन्त्रित खुट्टा लिनुहोस्
शुरुवातले 20mg / दिनको खुराक भन्दा बढि हुँदैन। यद्यपि केही अनुभवी शरीरबहिनीहरूले स्टेरॉयडको 100mg सम्म लिने जोखिम खडा गर्नेछन्, यो अभ्यास असुरक्षित छ। यदि तपाईले मात्रा बढाउनु भयो भने, 50mg सबै सही छ। उच्च खुराकले रक्तचापको उचाई जस्ता साइड इफेक्टहरू तीव्र गर्न मिल्छ।
ध्यान दिनुहोस् कि Dianabol चक्र6देखि आठ हप्ताको बीचमा हुनुपर्दछ।
बच्चाहरु, किशोरहरु, या 30 वर्ष भन्दा कम कसैलाई
बच्चाहरूमा, डियानोबोल लिन हड्डीको परिपक्वता र यौन विकासको साथ हस्तक्षेप गर्नेछ।
स्टेरॉइडले भ्रूण असामान्यताहरूको सामना गर्न सक्छ
स्तन र प्रोस्टेट क्यान्सर रोगीहरू
ठूला जन लाभहरू
तपाईंले खुल्ला सुरुवात गर्नुहुने प्रभावहरू चाँडै शुरु गर्नुहुने छ। तपाइँलाई फोटो भन्दा फरक र पछि फर्कनका लागि Dianabol तुलना गर्न पनि आवश्यक छैन। पहिलो हप्ता पछि, तपाईंको शरीर भराउनेछ, र तपाईंले महत्त्वपूर्ण वजन हासिल गर्नुहुनेछ।
जिममा व्यायाम गर्दा, तीव्र कार्यआउट प्रदर्शन गर्न वा भारी वजन लिने तपाईंसँग पर्याप्त शक्ति पाउनेछ। चक्रको अन्त्यमा, तपाइँले 20lbs को नजिक केहि चीज प्राप्त गर्नुहुनेछ।
मानव वृद्धि हार्मोन उत्पादन बढाउँछ
यो औषधी केहि छ कानूनी स्टेरियोड्स जसले विकास हार्मोनलाई बढावा दिन्छ। यदि तपाइँ स्वस्थ आहार र नियमित workouts संग Dianabol स्ट्याक मिलाउनुहुन्छ भने, स्टेरॉइड जादू गर्दछ। यद्यपि तपाइँ केही उचित जन प्राप्त गर्नुहुन्छ तापनि तपाईको शरीरको मोटाइ निकै कम हुन्छ।
बिक्रीको लागि धेरै स्टेरॉयड इंजेक्शन योग्य छन्। यद्यपि, डियानोबोल मौलिक रूपमा गोलहरू, ट्याबलेटहरू, क्याप्सुल, वा तरल रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ। तपाईं पनि आफ्नो Dianabol पाउडर नुस्खा गर्न सक्छन् र खुट्टा अनुकूलन।
सबैभन्दा लामो डबलब साइड इफेक्ट उच्च रक्तचाप, जिगरको क्षति र gynecomastia हुन्। तथ्य यो हो कि तपाइँको छाती रहस्यमय ढंग से एक हफ्ते से कम में पूर्ण हो जाता है एक गिरावट हो सकता है। तपाईका बाहिरी प्रभावहरू नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत अनुशासन र दिशानिर्देशहरू पालन गरेर, तर gynecomastia अनियन्त्रित छ।
अन्य साइड इफेक्टहरू जसले शरीरबहिनीहरूलाई बनाउँदछ यो औषधि बन्द गर्न बांझपन, हृदय समस्या, र लिभरको क्षतिको संभावना हो।
जब तपाईं anabolic स्टेरियोड्स को बारे मा सुनेको छ, आफ्नो दिमाग को माध्यम ले धेरै प्रश्नहरु निश्चित हुनेछ। "Dianabol कानूनी छ?","के म एक वैध पर्चे को बिना एक खुराक प्राप्त गर्न सक्छु?","जब स्टेरियोड्सहरू आविष्कार भए?"र समान प्रश्नहरू। माथिको लेखमा तपाईंले खोज्नु भएको सबै उत्तरहरू छन्।
बिक्रीको लागि Dbol 1960 र 1970 स्टिरोइड बडिबिल्डिंग युग बीच व्यापक थियो। तथापि, यसको दुष्प्रभावले एफडीएलाई कक्षा III पदार्थको रूपमा वर्गीकरण गर्दछ र यसको खपत सीमित गर्छ। संयुक्त राज्यमा, डियानोबोल केवल पर्चा मार्फत मात्र उपलब्ध छ।
Armodafinil को बजार मा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स)
शीर्ष 10 टेस्टोस्टेरोन एस्टर: जो तपाईंको लागि सही छ? ओक्सिम्याथलोन समीक्षाहरू: अल्टाइम गाइड ओक्सिमथोलोन (Anadrol)